10.1 လက်မ2ဒင်ကို Android 6.0 က Universal China Manufacturer
ဖေါ်ပြချက်:2 ဒင်ကို Android 6.0 က Universal,10.1 လက်မကို Android 6.0 က Universal,အန်းဒရွိုက် 6.0 က Universal
Home > ထုတ်ကုန်များ > Universal Android Car Dvd > 10.1 လက်မ2ဒင်ကို Android 6.0 က Universal
10.1 လက်မ2ဒင်ကို Android 6.0 က Universal
လက်မှတ်: CE FCC
1: ဒီယူနစ်တီဗီ function ကို3ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး: သင် 4G Modem လိုအပ်ခဲ့လျှင်အခြား 40 $ add ဒီ2နောက်ဘက်ကို USB ဝါယာကြိုးမှတဆင့် / ကားတစ်စီးတက်ဘလက် / NO DVD function ကို / ပံ့ပိုးမှု 500G hard drive ကိုဆက်သွယ်မှုဖြစ်ပါသည်
အရေးကြီး / မှတ်ချက်: သင်ပိုမိုမြန်ဆန်အင်တာနက်ရရှိရန်အမိန့်ထဲမှာသင့်ရဲ့ 4G မိုဘိုင်း SIM ကိုကတ်အသုံးပြုချင် အကယ်. သာလျှင်ကိုအကြှနျုပျတို့မှ 4G dongle ဝယ်ဖို့ရှိသည်။
တရုတ်အနေဖြင့်ယူနစ်ကှကျ + ရေကြောင်းကုန်ကျစရိတ် + သင့်ရဲ့အစိုးရအကောက်ခွန်အခွန် = အကွက် Get / ဒါကြောင့်သင်ကမဝယ်မီ, သင်အထုပ်၏တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်? ဒါကကြေညာသင့်ပါတယ်ဘယ်လောက်လဲသင့်ရဲ့အစိုးရကဆပ်ဖို့ဘယ်လောက်အကောက်ခွန်အခွန်မလိုအပ်ပါဘူးအတည်ပြုနိုင် စျေးနှုန်းသင့်ရဲ့တိုင်းပြည်အကောက်ခွန်အခွန်မပါဝင်ပါဘူး။ ကွဲပြားခြားနားသောတိုင်းပြည်ကွဲပြားခြားနားသောအကောက်ခွန်တာဝန်ခံရှိပါတယ်, သင်ဟာအင်တာနက်ကနေစစ်ဆေးလိုအပ်ပါတယ်။
built-in မြေပုံအကြောင်း 3. :
မြေပုံ & GPS <အင်တာနက်မလိုအပ်ပါနှင့်>
အောက်ပါဧရိယာနှင့်တိုင်းပြည်အပါအဝင် IG0 အခမဲ့မြေပုံ:
ဥရောပ: အယ်လ်ဘေးနီးယား, အင်ဒိုရာ, သြစတြီးယား, ဘီလာရုစ်, ဘယ်လ်ဂျီယံ, ဘော့စနီးယား, ဘူလ်ဂေးရီးယား, ခရိုအေးရှား, ဆိုက်ပရပ်စ်, CzechRepublic, ဒိန်းမတ်, စတိုးနီးယား, ဖင်လန်, ပြင်သစ်, ဂျာမနီ, ဂျီဘရောလ်, ဂရိ, ဟန်ဂေရီ, အိုက်စလန်, အိုင်ယာလန်, အီတလီ, ကိုဆိုဗို, လတ်ဗီးယား, လီချင်စတိန်း, လစ်သူ, လူဇင်ဘတ်, မော်လ်တာ, မော်လ်ဒိုဗာ, မိုနာကို, နယ်သာလန်,
နော်ဝေး, ပိုလန်, ပေါ်တူဂီ, ရိုမေးနီးယား, ရုရှား, San_Marino, ဆားဘီးယား, Slovakia လိုဗေးနီးယား, စပိန်, ဆွီဒင်, ဆွစ်ဇာလန်, တူရကီ, ယူကရိန်း, ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း။
10.1 လက်မ2ဒင်ကို Android 6.0 က Universal ၏ရုပ်ပုံများ:
10.1 လက်မ2ဒင်ကို Android 6.0 က Universal ၏ဆက်စပ်ပစ္စည်း:
အန်းဒရွိုက် 7.1 ခုနစ်လက်မ Deckless က Universal အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
10.1 လက်မ2ဒင်ကို Android 6.0 က Universal အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
VW တို့က Universal သည်မော်တော်ကားဗီဒီယို player အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
7 လက်မ Player ကိုများအတွက် universal မော်တော်ကား DVD ကို အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Universal Player ကိုသည်မော်တော်ကားဗီဒီယို player အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အန်းဒရွိုက်က Universal Player ကိုသည်မော်တော်ကားမာလ်တီမီဒီယာ အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အန်းဒရွိုက် 7.1 စနစ်က Universal ကားကို DVD Player ကို အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
2 ဒင်ကို Android 6.0 က Universal 10.1 လက်မကို Android 6.0 က Universal အန်းဒရွိုက် 6.0 က Universal 6.2 လက်မက Android က Universal 10.1 လက်မကို Android 5.1 Verna hot ရောင်းရန်ကို Android 9.0 VW တို့က Universal H1 2016 ကားကို Android 9.0 Ford ကားကို Android 4.2 ကား DVD